Naanị nkeji iri abụọ na ise site na Dublin, ebe a na-eme okomoko nke dị 25 acres nke ọzara, ogige ọhịa oge ochie, ọdọ mmiri na Osimiri Rye meandering na-emepụta ọnọdụ zuru oke maka nnukwu ụlọ obodo dị egwu. Ozugbo ụlọ nna nna nke Earls nke Kildare na ndị isi nke Leinster, ụlọ a nwere mgbidi gbara ọkpụrụkpụ na ihunanya nke oge gara aga, ebe mmadụ nwere ike nyocha akụkọ na akụkọ ihe mere eme n'akụkụ niile.
Carton House, Fairmont Managed Hotel bụ ụzọ mgbapụ okomoko kachasị mma. Debe acres 1,100 nke ogige Kildare, naanị nkeji iri abụọ site na ọdụ ụgbọ elu Dublin International, ọ bụ otu n'ime akụ mba kacha atọ ụtọ na Ireland. Mgbe ị rutere n'ụlọ Carton, ị banyere ebe bara ọgaranya nke nwere ihe karịrị narị afọ atọ nke akụkọ ntolite. Na mbụ, ezinụlọ FitzGerald a ma ama na nnukwu mmadụ, akụkọ ihe mere eme ya dị oke egwu na akụkọ dịka nke mba anyị n'onwe ya; bara ọgaranya na nka, ọdịbendị, ihunanya na ndọrọndọrọ ọchịchị, nke enwere ike inwe mmetụta nke ya ka ị na -aga ụlọ nzukọ taa.
Ọtụtụ ihe omume ntụrụndụ na -echere gị site na okirikiri ma ọ bụ na -aga ije na tenis, falconry na ịkụ azụ. Mgbe mweghachi dị ukwuu na okomoko mezigharịrị ụlọ mbụ nke The House ga -abụ n'obi nke ụbọchị ọ bụla. Site na kọfị ụtụtụ gị n'ime ime ụlọ Mallaghan ruo mgbede na mgbede na Ọbá akwụkwọ Whiskey, onyinye ụlọ na -enye ndị ọbịa ohere ịnụ ụtọ mgbanwe dị mma na ọnọdụ izu ike nke ụlọ ọdịnala obodo. Nọrọ na ebe iri nri atọ pụrụ iche - Kathleen's Kitchen, The Morrison Room ma ọ bụ The Carriage House; gbaga na Carton House Spa & Wellness nke gosipụtara ọdọ mmiri 3 mita, Jacuzzi na mgbatị ahụ. Colin Montgomerie na Mark O'Meara haziri asọmpi golf abụọ ha nwere oghere iri na asatọ. Carton House bụ ụzọ mgbapụ okomoko kachasị mma.
Modern, Hotels, okomoko, Hotlọ nkwari akụ Spa, Mmiri mmiri, Ebe Agbamakwụkwọ, Maynooth
Maynooth, Obodo Kildare, W23 TD98, Ireland.